Massachusetts Institute of Technology (WITH) - Study in USA
fanafohezan-teny : WITH
Créé : 1861
mpianatra (eo ho eo.) : 12000
Aza adino ny ifanakalozy hevitra Massachusetts Institute of Technology
Misoratra anarana ao amin'ny Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology dia miankina andrim-panjakana izay naorina tamin'ny 1861.
Ny saram-pianarana ao amin'ny Massachusetts Institute of Technology dia $48,000 (Aprox.).
MIT no misy ao Cambridge, Massachusetts, manerana ny avy any afovoan-tanàna Charles Reniranon'i Boston. Ihany ireo mpianatra mpianatry ny taona voalohany dia tsy maintsy hiaina ao amin'ny fonenan'ny mpianatra, fa ny 70 isan-jaton'ny mpianatra misafidy ny hijanona ao amin'ny toeram-pianarana mandritra ny efa-taona. MIT manolotra trano ao amin'ny iray amin'ireo dorms mahafinaritra indrindra ao amin'ny firenena, antsoina matetika hoe “The Fanalana,” natao ny maritrano Steven Holl. Ny injeniera MIT mirehareha mihoatra noho 30 NCAA Division III ekipa, ary ny mascot dia Beaver, izay MIT nifidy noho ny “miavaka injeniera sy ny milina fahaizana sy ny fahazarana ny indostria.” Ny kilasy tsirairay notendren'Andriamanitra ho tsy manam-paharoa peratra antsoina hoe ny “varahina Voalavo” izay nambara nandritra ny taona sophomore, ny fomban-drazana taonjato indray 1929.
MIT dia mifantoka amin'ny ara-tsiansa sy ny teknolojia fikarohana sy miady an-trano ho dimy sekoly sy oniversite iray. Anisan'ireo nahazo diplaoma ny sekoly ny tena laharana faha Sekoly injeniera andSloan Sekolin'ny Management, ankoatra ny mafy fandaharana amin'ny toekarena, psikolojia, Haiaina, simia, eto an-tany siansa, Fizika sy ny matematika. Research fandaniana ao amin'ny MIT no matetika nihoatra $650 tapitrisa isan-taona, amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny governemanta sampan-draharaha toy ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Fanasoavam sy Department of Fiarovana. The “Independent Activities Program,” ny efatra herinandro eo ho latsaka teny sy ny lohataona semesters tamin'ny Janoary, manome taranja manokana, lectures, fifaninanana sy ny tetikasa. Anisan'ny miavaka Alumni Apollo 11 mpanamory sambon-danitra Buzz Aldrin, teo aloha U.N. Kofi Annan, Sekretera Jeneralin'ny sy Federal Reserve Bank Filohan'ny Ben Bernanke.
Ny asa nanirahana ny Massachusetts Sekoly Momba ny Teknolojia dia ny hampandrosoana ny fahalalana sy hanabe ireo mpianatra ao amin'ny siansa, teknolojia, sy ny faritra hafa ny manam-pahaizana izay tsara indrindra hanompo ny firenena sy izao tontolo izao ao amin'ny taonjato faha-21. Isika koa dia entin'ny mba hitondra fahalalana mba hiteraka eo amin'izao tontolo izao ny zava-tsarotra lehibe.
Ny Institute dia tsy miankina, coeducational, mangingina ny fanafiana masina oniversite, Nalamina ho dimy Sekoly (trano sy ny fandaminana; injeniera; humanities, zavakanto, ary siansa ara-tsosialy; fitantanana; sy ny siansa). Tsy manana 1,000 mpikambana ao amin'ny sampam-pianarana, mihoatra ny 11,000 undergraduate sy ny mpianatra nahazo diplaoma, ary mihoatra noho 130,000 velona Alumni.
Tamin'ny ny nanorenana in 1861, MIT i fanabeazana zava-baovao, ny fiaraha-monina ny tanana-amin'ny hamaha olana amin'ny fitiavana amin'ny fototra siansa sy dodona ny hanao izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa. Today, io fanahy io mbola mitarika ny fomba hampianarana ny mpianatra ao amin'ny toeram-pianarana sy ny fomba mamolavola fianarana teknolojia nomerika vaovao mba ho MIT nampianatra azon'ny mpianatra an-tapitrisany manerana izao tontolo izao.
MIT ny fanahin'ny interdisciplinary fitrandrahana ara-tsiansa maro no atosiky breakthroughs sy ny teknolojia fandrosoana. A ohatra vitsivitsy: ny voalohany sy voafintina, penisilinina simika sy ny vitaminina A. Ny fampandrosoana ny Radar sy ny fananganana rafitra inertial tari-dalana. Ny noforonin'ny ny andriamby fototra fitadidiana, izay nanampy ny fampandrosoana ny dizitaly solosaina. Major anjara biriky ho amin'ny Human Genome Project. Ny fahitana quarks. Ny namorona ny elektronika kajy sy ny fanafenana ny rafitra izay afaka e-varotra. Ny famoronana ny GPS. Ny Asan'ny Mpisava Lalana 3D pirinty. Ny foto-kevitry ny fanitarana izao rehetra izao.
Current fikarohana sy ny fanabeazana faritra nomerika ahitana fianarana; nanotechnology; angovo maharitra, ny tontolo iainana, toetr'andro fampifanarahana, ary ny rano maneran-tany sy ny ara-tsakafo; Big Data, cybersecurity, Robotics, ary solon-tsaina; olombelona fahasalamana, anisan'izany ny homamiadana, VIH, autiste, Alzheimer, ary dyslexia; biolojika injeniera sy ny CRISPR teknolojia; fahantrana fanamaivanana; mandroso orinasa mpamokatra entana; sy ny zava-baovao sy ny fandraharahana.
Ny fiantraikan'ny MIT koa ny ny asan'ny Alumni. Ny fomba iray nahazo diplaoma MIT mitondra fiara fandrosoana dia amin'ny alalan'ny manomboka orinasa izay manolotra hevitra vaovao ho an'izao tontolo izao. Nisy fanadihadiana vao haingana Tombanan'ny tahaka ny 2014, velona MIT Alumni efa nanomboka mihoatra noho 30,000 active orinasa, famoronana 4.6 tapitrisa asa ary niteraka mitovitovy $1.9 tapitrisa tapitrisa in miditra isan-taona. nalaina miaraka, izany “AMIN'NY firenena” dia mitovy amin'ny faha-10-toe-karena lehibe indrindra eto an-tany!
Sekoly maritrano sy Planning
Sekolin'ny Humanities, Arts, ary Siansa Sosialy
In 1859, soso-kevitra dia atolotra ny Massachusetts General Fitsarana hampiasa vao feno tany in Back Bay, Boston ho “Conservatory ny Art sy ny Siansa”, fa ny soso-kevitra tsy. A NY SATAN'NY ny fampidirana ao amin'ny Massachusetts Institute Momba ny Teknolojia, naroson'ny William Barton Rogers, dia nanao sonia ny governoran'i Massachusetts Aprily 10, 1861.
Roa andro taorian 'ny sata navoaka, ny tamin'ny ady voalohany ny ady an-trano nipoaka. Ary nony ela fanemorana ny alalan 'ny ady taona, MIT kilasy voalohany natao tany Fanorenana ny varotra, tao Boston in 1865. Institiota vaovao naorina izay tafiditra ao ny Tany Morrill-Grant Colleges Act mba bola andrim-panjakana “mba hampiroborobo ny nalala-tsaina sy azo ampiharina ny fanabeazana ny indostria kilasy”, ary dia tany-Grant sekoly. In 1863 iharan 'izany asa, ny Commonwealth of Massachusetts nanangana ny Massachusetts Fambolena College, izay Nanjary toy ny Anjerimanontolon'i Massachusetts Amherst. In 1866, ny dia avy tany varotra nandroso ho any trano vaovao ao amin'ny Back Bay.
MIT dia tsy ara-potoana antsoina hoe “Boston Tech”. Ny institiota nandany ny Eoropeana oniversiten'ny anjerimanontolo, ary nanantitrantitra laboratoara modely fampianarana avy amin'ny daty tany am-boalohany. Na dia eo aza ny olana ara-bola mitaiza, ny institiota nahita fitomboana teo amin'ny roapolo taona farany tamin'ny taonjato faha-19 eo ambany Filoha Francis Amasa Walker. Programs in herinaratra, simika, an-dranomasina, ary ny fahadiovana injeniera dia nampidirina, ireo trano vaovao naorina, ary ny haben'ny vatana ny mpianatra nitombo mihoatra ny iray arivo.
Ny fandaharam-pianarana arak'asa nirona tany amin'ny fanamafisana, amin'ny tsy hifantoka teorika siansa. Mbola vao niforona nijaly sekoly mitaiza ara-bola avy amin'ny tsy fahampian'ny izay navily ny sain'ny mpitarika ny MIT. nandritra ireo “Boston Tech” taona, MIT sampam-pianarana sy ny Alumni rebuffedHarvard filoha University (ary ny teo aloha fahaizan MIT) Charles W. Eliot ny ezaka miverimberina mampiray MIT amin'ny Harvard i Lawrence College Scientific School. Hisy enina, fara fahakeliny, miezaka mandray MIT ho any Harvard. Ao amin'ny toerana tery Back Bay, MIT tsy manam-bola mba hanitarana ny trano feno olona loatra, mitondra fiara iray mitady fatratra ny toeram-pianarana vaovao sy ny famatsiam-bola. Taty aoriana ny MIT Corporation neken'ny fifanarahana ofisialy mampiray amin'ny Harvard, noho ny fanoherana ny MIT mahamay sampam-pianarana, mpianatra, ary Alumni. Na izany aza, ny 1917 fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony Fitsarana Massachusetts-pahombiazana hamarana Ny fanambarana rafitra.
In 1916, ny MIT fitondrana sy ny MIT Sata niampita ny Reniranon'i Charles eo amin'ny fombafomba sambo Bsntur naorina ho an'ny fotoana, mba mampahafantatra ny MIT Nifindra tany malalaka toeram-pianarana vaovao tena ahitana feno tany amin'ny iray kilaometatra-taratasy mivalona ela eny an-Cambridge lafiny iray koa amin'ny Charles River. The neoclassical “New Teknolojia” Noforonin'Andriamanitra ny fonenan'ny mpianatra William W. Bosworth dia efa novatsian'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fanomezana tsy nitonona anarana avy amin'ny saro-pantarina “Mr. Smith”, nanomboka tamin'ny 1912. Tamin'ny volana Janoary 1920, ny mpamatsy vola nambara ho industrialist George Eastman ny Rochester, New York, izay Namorona fomba famokarana sy ny fanodinana sarimihetsika, ary nanorina Eastman Kodak. Teo anelanelan'ny 1912 ary 1920, Eastman nanome $20 tapitrisa ($236.2 tapitrisa in 2015 dolara) lelavola sy ny Kodak tahiry an'i MIT.
MIT tsy mitsahatra haingana miaraka ary nanampy mba hampandrosoana ny vanim-potoana nomerika. Ankoatry ny fampandrosoana ny teo alohany amin'ny computing maoderina sy ny tambajotra teknolojia, mpianatra, mpiasa, ary ny sekoly ambony mpikambana ao amin'ny Project MAC, ny fahaizana artifisialy Laboratory, ary ny Tech Model lalamby Club nanoratra ny sasany amin'ireo voalohany ifandrimbonana ordinatera toy ny lalao video Spacewar! ary namorona betsaka ny tenin-jatovo mpijirika maoderina sy ny kolontsaina. Lehibe maro solosaina mifandray amin'ny fikambanana ao amin'ny MIT hatramin'ny niandohan'ny taona 1980: Richard Stallman ny GNU Project sy ny Free Software Foundation tatỳ aoriana dia naorina tao amin'ny tapaky ny taona 1980 tao amin'ny AI Lab; ny MIT Media Lab naorina tany 1985 ny Nicholas Negroponte sy Jerome Wiesner hampiroborobo ny fikarohana ho tantara foronina fampiasana ny solosaina teknolojia; ny World Wide Web Consortiumstandards fikambanana naorina tamin'ny Laboratory for Computer Science in 1994 ny Tim Berners-Lee; ny tetikasa OpenCourseWare nanao Mazava ho azy fa fitaovana mahery 2,000 MIT kilasy hita ao anaty aterineto maimaim-poana hatramin'ny 2002; ary ny iray isan-Laptop Ankizy fandraisana andraikitra mba hanitarana solosaina fanabeazana sy ny fifandraisana amin'ny ankizy maneran-tany natomboka tany 2005.
MIT dia atao hoe ny ranomasina-Grant oniversite in 1976 ho fanohanana ny fandaharana amin'ny oceanography sy ny siansa an-dranomasina ary ny toerana atao hoe oniversite in-Grant 1989 mba hanohanana ny aeronautics sy astronautics fandaharana. Na dia eo aza ny fanohanana ara-bola ny governemanta mihena nandritra izay taonjato lafiny, MIT nandefa fahombiazana maro be fampandrosoana fanentanana mba hanitarana ny fonenan'ny mpianatra: dormitories vaovao sy ny trano teo andrefana atletisma toeram-pianarana; ny Tang Education Center for Management; trano maro teo avaratra atsinanan'ny zorony oniversite manohana fikarohana ho biolojia, atidoha sy ny teknika momba ny siansa, Fandinihana ny fototarazo, fanafody na, sy ny fikarohana ny homamiadana; ary maro ny vaovao “backlot” trano ao amin'ny Vassar Street anisan'izany ny Stata Center. Fanorenana ny toeram-pianarana ao amin'ny taona 2000 Anisan'ny fitomboan'ny ny Media Lab, ny Sloan ny atsinanana toeram-pianarana Sekoly, ary ny diplaoma fonenana ao amin'ny avaratra andrefana. In 2006, Filoha Hockfield nandefa ny MIT Filan-kevitra Angovo Research mba hanadihady ny interdisciplinary nametraka fanamby amin'ny fampitomboana eran-angovo.
In 2001, aingam-panahy avy amin'ny loharano misokatra sy mivelatra ny fidirana hetsika, MIT nandefa OpenCourseWare mba hanao ny lahateny-tsoratra, olana milentika, syllabuses, fanadinana, ary ny lahateny avy amin'ny ankamaroan'ny ny antokony ho hita amin'ny aterineto tsy mba niampanga, na dia tsy misy fankatoavana ara-dalàna ho an'ny coursework vita. Raha ny vola lany amin'ny fanohanana sy mampiantrano ny tetikasa dia avo, OCW nitarina in 2005 mba ahitana oniversite hafa ho toy ny ampahany amin'ny OpenCourseWare Consortium, izay ahitana amin'izao fotoana izao mihoatra noho ny 250 akademika andrim-panjakana amin'ny votoaty misy amin'ny fiteny enina, fara fahakeliny,. In 2011, MIT nanambara izany dia manolotra fanamarinana ofisialy (nefa tsy nahazoan-dalana na ambaratonga) ho mpandray anjara amin'ny aterineto coursework vita amin'ny “Mitxeu” fandaharana, ho maotina sarany. The “edX” sehatra an-tserasera manohana MITx dia nanjary voalohany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Harvard sy ny analogous “Harvardx” fandraisana an-tanana. Ny sehatra misokatra pampianarana loharanom-baovao, sy ny oniversite no efa niaraka ary nanampy ny Mazava ho azy fa afa-po.
Telo andro taorian'ny daroka baomba ny Boston Marathon Aprily 2013, MIT manamboninahitra polisy fisafoana i Sean Collier faty ilay mpamaly ra voatifitry ny ahiahiana Dzhokhar sy Tamerlan Tsarnaev, mametraka avy eny ambony herisetra fihazana olombelona amin'izany fa hanakatona ny toeram-pianarana sy ny ankamaroan'ny tanàn-dehibe ny Boston ho iray andro. Herinandro taty aoriana, Collier fanompoana ny Fahatsiarovana no nanatrika mihoatra noho ny 10,000 olona, tao amin'ny lanonana nampiantranoin'ny ny vondrom-piarahamonina amin'ny MIT an'arivony polisy avy ao amin'ny New England faritra sy Kanada. tamin'ny Novambra 25, 2013, MIT nanambara ny fananganana ny Collier Medaly, ho loka isan-taona ny “olona iray na vondrona izay maneho ny toetra sy ny toetra manamboninahitra Collier nampiseho toy ny mpikambana ao amin'ny MIT sy fiaraha-monina amin'ny lafiny rehetra teo amin'ny fiainany”. Ny fanambarana koa dia nilaza fa “Future olona nahazo ny loka dia ahitana ireo izay anjara biriky mihoatra ny faritry ny asa, ireo izay nandray anjara tamin'ny fananganana tetezana manerana ny fiaraha-monina, ary ireo izay tsy tapaka ary Tsy Tia Tena manao fihetsika feno hatsaram-panahy”
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra Massachusetts Institute of Technology ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Massachusetts Institute of Technology ao amin'ny Map
Photos: Massachusetts Institute of Technology ofisialy Facebook
Massachusetts Institute of Technology Hevitra
Miaraha mba hiresahana amin'ny Massachusetts Institute of Technology.
Oniversiten'i Michigan Ann Arbor
Lehigh University Betlehema